होम आइसोलेसनमा बस्दा यी १६ उपाय अपनाऔं - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
४. अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला। यो नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिया गराउँछ। तसर्थ नजिकको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसंग जांच गराउनुहोला। छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गरेर फोक्सोको अवस्था अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि ९एन्टिभाइरल र एन्टिबायोटिक ० खानुपर्ने हुन्छ। कोभिड निमोनिया भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ।
गोरखामा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको होम आइशोलेसनमै मृत्यु
गोरखामा होम आइसोलेसनमा बसेका एक कोरोना संक्रमितकोे मृत्यु
के तपाईको कपाल झर्ने समस्या छ? यस्ता छन् रोक्ने उपाय-
नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका आँखा बिगार्ने घातक “कालो ढुसी” के हो ?